Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » Ndị njem China dị njikere ma na -atụkwa ụjọ ife ọzọ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ihe karịrị ọkara nke ndị zara ajụjụ nyocha kwuru na ha dị njikere isi na China China pụọ ​​ozugbo ókèala mepere emepe, ebe ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia bụ mpaghara kachasị nhọrọ, Europe, Australia/New Zealand na East Asia sochiri.
Ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị njem China agbagoro ụgbọ elu ụlọ kemgbe mmalite nke ọrịa COVID-19.
Pasent 81 nke ndị zara ajụjụ nyocha kwuru na ha na-eme atụmatụ ife efe opekata mpe n'ime ọnwa iri na abụọ na-abịa.
N'ime ndị na-eme atụmatụ njem, 73% ga-eme njem maka ntụrụndụ, yana naanị 24% na-eme atụmatụ njem azụmahịa.
Dabere na nyocha ụlọ ọrụ njem ọhụụ, 96% nke ndị njem na-abata China dị njikere ma na-eme atụmatụ iji ụgbọ elu mee njem n'ọdịnihu dị nso.
81% nke ndị zara ajụjụ nyocha ahụ kwuru na ha na-eme atụmatụ ife efe opekata mpe n'ime ọnwa iri na abụọ na-abịa yana 12% na-eme atụmatụ ifefe n'oge mgbụsị akwụkwọ a.
N'ime ndị na-eme atụmatụ njem, 73% kwuru na ọ bụ maka ntụrụndụ na naanị 24% na-eme atụmatụ njem azụmahịa.
A na-egosikwa ihe a chọrọ China's njem njem, nke na-egosi ihe ịrịba ama nke mgbake siri ike. Dị ka nke Septemba 2021, okporo ụzọ China nọ na 87% nke ọkwa 2019 - ụzọ dị n'ihu Asia ndị ọzọ (42%).
Nnyocha ahụ gosiri na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ (66%) nke ndị njem China agbagoro ụgbọ elu ụlọ kemgbe ọrịa a malitere. Data nhazi oge na-ekpughe njem ụlọ na Q4 bụ nke a na-ebuli elu karịa ọkwa ọrịa mbụ, na-eto site na 15% ma e jiri ya tụnyere Q4 2019.
N'ịgbaso ọnwa mmachibido iwu China Zero-COVID, mmụba a na-achọ maka ịlaghachi azụ na njem mba ofesi na mpaghara doro anya.
Ihe karịrị ọkara (61%) ndị zara ajụjụ nyocha kwuru na ha dị njikere isi n'ala ala China ozugbo emepere oke, ebe Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia bụ mpaghara oke nhọrọ, Europe, Australia/New Zealand na East Asia sochiri ya.